Amisom oo taageertay mowqifka dowladda Soomaaliya ka qaadatay shirarka Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa taageertay go’aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay shirar iska soo horjeeday oo maalamahaan ka socday Baydhabo.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay taageertay shirka lagu dhisayo maamulka sadde xgobol oo kala ah: Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose, iyadoo muujisay ineysan soo dhaweyneyn maamul 6 gobol ah.
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska ergayga Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Maxamed Saalax Annadif ayaa lagu sheegay in AMISOM ay taageerayso go’aanka maamul sameynta dalka ee waafaqsan dastuurka KMG ah.
Ergayga UN-ka u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa dadka ku dhaqan Baydhabo kula taliyey iney taxadar muujiyaan, kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara colaad.